Geert Hofstede (1998) akataura kuti hunhu Masculinity / hukadzi. Ichi chimiro hachina kunzwisiswa Makuriro anowanzo kanganisika nepfungwa yekuzvimirira. Senge Zvakataurwa naHofstede, tsika yevanhurume inopfupikisa varume seKuvimba uye kubudirira kwenyama, inomiririrwa nevakadzi Uye vane hanya. Kune rimwe divi, nzanga dzinofarira vakadzi dzinowanzo kune Varume nevakadzi vane uye vanoda mwero uye unyoro.
Hofstede naVunderink (1994) vakafananidza zvakananga United States Mumunda wechirume / wechikadzi. Varume vevadzidzi vekuAmerican vangangobvumirana nemhinduro dzevarume Nezve ravo remangwana basa; semuenzaniso, kuyera mari, hutano, Uye kufambira mberi kwakakosha kupfuura vadzidzi vanobva kuNetherlands. Mukupesana, vadzidzi vanobva kuNetherlands vane mukana wekuziva Mapurojekiti anosanganisira mipiro kukambani yavo, Shandisa hunyanzvi hwavo, uye kubatsira vamwe. Saka vanhu vanobva kuAmerica Nyika dzinoita sedzine tsika dzakakwirira kupfuura vakadzi-vanokoshesa Vanhukadzi vanobva kuNetherlands vanowanzove mukadzi wechikadzi.
Musiyano uripo pakati pehunhu hwechirume nehunhu hwechikadzi unogona kuva Zvinogona kunyatsoonekwa kana uchiona nzvimbo mbiri dzekudzidzisa (Hofstede, 1998). Kunyanya kukosha, masiyano echirume neechikadzi makirasi, tsananguro yacho inobudirira. Mutsika yechikadzi, zvibodzwa zvepakati ndezvevadzidzi Chiyero chebvunzo chinoonekwa sechinhu chakajairika. Izvo zvakasiyana zvachose Kubva kune yechirume tsika iyo inofunga kuti iri pamusoro pevhareji chiyero. Uye zvakare, kumanikidza kwepamusoro-soro kumanikidza uye kukwikwidza zvakanyanya mukurumbira muzvikoro zvevanhurume nemayunivhesiti. Asi haisi yechikadzi. Zvichienderana neiyi yakasarudzika tsika tsika, Vadzidzi vanobata tsika dzakatarisana mundima iyi vanogona kubata nzvimbo yekudzidza neyedzidzo nenzira dzakasiyana.
Pamusoro pezvemurume / mukadzi nzira, United States neNetherlands zvakasiyanawo nedzimwe nzira. Holland yakajairwa seimwe yenzvimbo dzinonyanya kufadza; muchokwadi, mumakore makumi maviri apfuura, vapfumbamwe kubva pagumi vakuru vanofara kwazvo (nhamba Netherlands [CBS], 2017). Vanenge 85% yevakuru vanotaura Ivo vanogutsikana nehupenyu hwavo uye nebasa. Nekudaro, mumakore gumi apfuura, iwo mwero wemufaro wevanhu veAmerica wakadzikira zvakanyanya: pakati pe31% uye 35% (Sifferlin, 2017).
Chete 47% kusvika 59% yevaAmerican ndivo vakagutsikana Vanga vachirarama kubva 2001 (McCarthy, 2019), uye 49% yevanhu vanogutsikana nebasa ravo razvino (Pew Research Center, 2016). Uye zvakare, iyo Netherlands inotanga kutanga maererano nemabasa-ehupenyu mwero, nepo United States iri padhuze nepasi pasi pakuenzanisa kwenyika makumi matatu nemasere (Hull, 2018). Kune imwe nhanho, izvi zvinogona kunge zvichikonzerwa nekuti avhareji maawa ekushanda vhiki nevhiki muNetherlands maawa makumi matatu pavhiki, nepo avhareji maawa ekushanda muUnited States ari maawa makumi mana pasvondo (Messenger & Ray, 2013).
Uye zvakare, hafu yevanosvika zviuru makumi maviri vekuAmerica vakaongororwa vakanzwa kusurukirwa Dzimwe nguva kana nguva dzose (Cigna, 2018). izvi zvinogona kuve Izvi zvinoenderana neepasi pabasa-hupenyu chiyero mwero muUnited States. Nekuda kweiyi misiyano mukugutsikana uye nebasa-rehupenyu chiyero, maDutch anotarisirwa kuve neakawanda maitiro ehungwaru nehunyanzvi.
Kufambisa kusimudzira kwezvakakosha zvepfungwa zvinodiwa kwakakosha mukati mechero tsika yekukurudzira kwemukati kubuda. Kudzidza kwedu kunovavarira kuona iwo mazinga ekufunga mumitauro yeAmerica neyechiDutch uye kuongorora kuti kufunga kunoshandura sei mukukudziridzwa kwezvinodiwa zvepfungwa mukati meimwe tsika. Kuongorora izvi zvinogadzirwa pakati pemaitiro maviri akafanana zvakafanana kunopa nzira yakasimba kuburikidza nekubatana, kunyanya pakati pekufunga uye zvakakosha zvepfungwa, pamwe nerutsigiro rwunofungidzirwa, runogona kuzivikanwa uye kudzidziswa.
Sezvo zvidzidzo zvekufunga zvaiitwa mutsika dzese, United States neNetherlands vakasarudzwawo kuti vaenzanise. Parizvino, hapana tsvakiridzo inoongorora kudyidzana pakati pezvivakwa nenyika mbiri idzi. Sezvo paine kuwirirana pakati pekuvandudzwa kwezvinodiwa zvepfungwa uye nerutsigiro rwemagariro, tsvagurudzo iyi zvakare inoedza kuona kubatana pakati pekufunga pamwe nerutsigiro rwetsika nemagariro senzira yekuwedzera yekuongorora. Isu tinofungidzira kuti vanhu veAmerican neDutch vane akasiyana mafungiro ekufunga. Nekuda kwekufunga kwekugutsikana kwehupenyu mutsika yega yega, vadzidzi veDutch vane hunyanzvi hwekufunga kupfuura vadzidzi veAmerica (Si Si erlin, 2017; Statistics Netherlands [CBS], 2017).
Mukuwedzera, tinoona kuti nekuda kwenhamba huru yevaAmerica vakaongororwa, maDutch achave neruzivo rwakakura rwevanhu (Cigna, 2018). Pfungwa yedu yechipiri ndeyekuti mutsika dzese, huwandu hwekufunga kwevadzidzi huchaenzana pakuzadzikiswa kwezvose zvitatu zvakakosha zvepfungwa. Uye zvakare, seyedu yechitatu yekufungidzira, isu tinotarisira kuti mubatanidzwa weyunivhesiti unodzora hukama pakati pehuwandu hwekufunga kwevadzidzi uye kugutsikana kwezvavanoda zvepfungwa.
Mhedziso yekupedzisira, nekuti tsika yeAmerica yakanyanya kuve yechirume pane yechiDutch tsika, tinofungidzira kuti hukama pakati pekufunga pamwe nerutsigiro rwemagariro kubva mutsika dzakasiyana siyana huchachinja.